किन क्लाउडबेरी उपयोगी छ?
यो सानो शरब पौधे हो, जुन 35 सेन्टिमिटरसम्म पुग्न सक्छ। फलहरू अम्बर जामुन जुन रास्पबेरी जस्तो देखिन्छ। धेरै पटक, क्लाउडबेरी फर पूर्वी क्षेत्र रूसमा आर्काइक क्षेत्रमा टन्ड्रा र सिबेरियामा रहेको छ, र अक्सर प्राय: बेलारूसको पोलीसी जंगली किनारमा झुन्डिएको इलाकामा भेट्टाउन सकिन्छ।
कटनीको मौसम अगस्ट सेप्टेम्बरमा हुन्छ। तिनीहरू ताजा र दुवै तयार भइरहेको जाम, जाम, जाम, तुलना गर्न सकिन्छ। उत्तरमा, क्लाउडबेरीको एक लोकप्रिय बर्तन क्लाउडबेरी हो, जसले यसको सबै उपयोगी गुणहरू राख्छ।
वैसे, यस बेरी देखि जाम पनि यसको वजन सुन मा लायक छ - एक 100 ग्राम को जाम ताजा जामुन को एक टोकरी को बराबर छ!
मोरोशका कमजोर, लामो समयसम्म जीवनलाई बलियो बनाउँछ। यो प्रसिद्ध छ कि प्रसिद्ध कवि पुष्किन को अन्तिम इच्छा cloudberries खाने को थियो, जुन बचपन देखि प्यार गर्दछ।
किन क्लाउडबेरी उपयोगी छ र यसको उपयोगी गुणहरू के हो?
यी एम्बर बेरीका लाभहरू विशाल छन्। हो त्यहाँ भन्न सकिन्छ - एक बेरीमा भिटामिन, खनिज, तत्वहरू र अमीनो एसिडहरूको सम्पूर्ण खण्ड समावेश गर्दछ। यो भिटामिन ए, ई, पीपी, बी 1, बी3मा समृद्ध छ। दूध पाउडर भिटामिन सी संग supersaturated छ, जो sauerkraut भन्दा6भन्दा बढी छ। भिटामिन ए द्वारा उज्ज्वल सुन्तला क्लाउरीबेरीको सराहना गरिन्छ, जुन गाजरमा तीन पटक बढी हुन्छ।
क्लाउडब्याकमा अयोग्य सेटमा उपयोगी गुणहरू। कस्तो प्रकारको रोगले तपाईलाई सोचेको छैन बारेमा - बंगलाएको अंगमा cloudberries एक curative प्रभाव हुनेछ।
Scurvy संग रोगियों को लागि, यो चमत्कार बेरी उत्तम लोक उपाय हो - र यो cloudberry को सबै भन्दा महत्वपूर्ण लाभ छैन।
जब स्किब्स छाला जामुन देखि जुस संग स्नेहन गरिन्छ - र संक्रमण केहि दिनहरुमा पास हुन्छ।
त्यसोभए, छाला रोगको साथ, यो शाही बेरी नम्बर एक चिकित्सकको रूपमा कार्य गर्दछ। र क्लाउडबेरी उपयोगी छ, उदाहरणको लागि, फ्लू महामारीको सिजनमा? फ्लू र चिसो संग, यो विरोधी भ्रामक प्रभाव हुनेछ, बुखार छुट्याउन र प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाइनेछ। यो क्लाउडबेरीबाट फ्लू जामको सीजनमा मद्दत गर्नेछ, जुन उपयोगी गुणहरू ताजा जामुनका फाइदाहरू देखि फरक छैनन्।
मोरोज्खा जलविद्युत र चोटमा अमूल्य छन्। उदाहरणका लागि, नेनेट्स र साइबेरियाको जनसंख्या विश्वस्त हुनुहुन्छ कि उत्तरी क्लाउबेरी पातहरु को फायदेमंद सम्पत्तियों को घाव देखि प्यास को हटान मा, जलाशय को निशान को तुरुन्त चिकित्सा। तपाइँले छालाको प्रभावित क्षेत्रको साइटमा क्लाउडबेरी पट्टि को लागी आवेदन गर्न आवश्यक छ र यसलाई हरेक 2-3 घण्टा परिवर्तन गर्दछ।
पोटेशियम, जो यो बेर उदारतापूर्वक हुन्छ, हृदयको मांसपेशीलाई बलियो बनाउनेछ र सामान्यतया हृदय रोगको रक्षा गर्दछ।
उत्कृष्ट डाईरेटिक प्रभाव छ, सूजन राहत गर्दछ। यस तथ्यको सम्बन्धमा, गर्भवती महिलाहरुका लागि क्लाउडबेरी एकदम राम्रो छ। साथै, यो टोपीफोलुल्फ (अधिक मात्र, भिटामिन ई) को उपस्थिति हुनेछ, जसले भविष्यको आमाको शरीरलाई समर्थन गर्नेछ र एक स्वस्थ बच्चाको जन्म सुनिश्चित गर्नेछ।
एन्टीमिक्रोबियल (विरोधी भ्रामक) र डायफोरिक क्रियाकलाप छ। बेरीजले भिटामिन सी (ascorbic एसिड) समावेश गर्दछ, जसले मानव शरीरमा भाइरसको प्रवेश रोक्छ।
वाहक सम्पत्ति। मोरोशकाले स्टूल र खाद्य विषाक्तताको विकारमा सहयोग पुर्याउनेछन्।
कसले क्लाउडबेरीको विपरीत प्रभाव पार्नेछ?
त्यहाँ जमिनको प्रयोगबाट लाभ नगर्ने एक वर्ग हो। त्यसैले, क्लाउडबेरीले पेट दुख्ने, कलिथाइटिस, इन्टिटाइटिस, ग्यास्ट्रिटीस, पेट अल्सर र डुडोनेल अल्सरको उच्च अम्लताबाट पीडितहरूलाई निषेध गर्न निषेध गरिएको छ।
यद्यपि, क्लाउडबेरी प्रकृतिको पातरीमा चमकदार जामुन मध्ये एक हो, र क्रेनबेरी र गोबरबेरीको साथमा खडा हुन्छ।
उबलिएको बाल्टीवाटको क्यालोरीको सामग्री
तपाई किन धेरै सब्जिहरु र फल खाईन्छ?
किन बटवेट उपयोगी छ?
हनी गुण र शरीरमा प्रभाव
अदरक र लेमन संग स्लिम
पनीर मा कति कैलोरीहरू छन्?
चायको उपयोगी गुणहरू - सबैभन्दा उपयोगी चियाको शीर्ष-11 प्रकार
माछा चार - लाभ र हानि
वसन्तमा महिलाहरुको लागि सबैभन्दा राम्रो भिटामिन के हो?
रातो कवरेज - राम्रो
कुन उत्पादनहरूमा फलाम हुन्छ?
हाम - क्यालोरी सामाग्री
स्वस्थ खाने बानीहरू
बैलेट जूता कसरी फैलाउने?
माटो संग आटो ज्याब्र
चिकनसँग पफ केक
प्लेटफर्ममा स्नीकर्स - के गर्ने र कसरी स्टाइलिश छवि सिर्जना गर्ने?
रूसमा ट्रकुले मशरूम कसरी बढ्छ?
सलाद «सेब संग Squids»
स्नान पछि एक कान राखेको छ
गणेश का भारतीय भगवान
भान्सामा भित्ता सजावट
पौराणिक बगैचा geranium - किस्महरू
वजन घटाने को लागि तरल आहार - व्यंजनहरु र मेनू
सेन्ट पीटर्सबर्गमा नोभोदेवीची कन्वेंचर
बाल विकासको लागि कास्टो तेल
टेलर स्विफ्ट र क्याल्भिन हैरिसको अविस्मरणीय छुट्टी थियो
अस्पतालमा थोरै सूची
ब्रोकोली गोभी - कसरि बनाउने?
जेनिफर लोपेज र क्यास्पर स्मार्ट, शेष साथीहरू थिए
स्ट्रिपहरूसँग बुना भयो कपडा
मौलिक चक्कर उठाउनुहोस्
कस्तो प्रकारको सामग्री एक नबूक छ?
शौचालय मा स्वच्छ स्नान
विनि डीजल र ड्यूने जॉनसनले "निरन्तर 8" मा परिष्करण गर्ने काम गरिरहेकी छिन्।